Kulanka Barcelona ay wajaheyso Sevilla oo muhiimmad gaar ah u leh Lionel Messi…(Muxuu doonayaa?) – Gool FM
Kulanka Barcelona ay wajaheyso Sevilla oo muhiimmad gaar ah u leh Lionel Messi…(Muxuu doonayaa?)
(Seville) 19 Juun 2020. Awoodda uu Messi u leeyahay inuu marwalba heer sare u ciyaaro ayaa ah mid loo riyaaqay, waxaana tan iyo bilawgii xirfaddiisa kubadda cagta uu gaarayay darajooyin iyo rikoorro kala duwan.
Si taas la mid ah, Messi ayaa caawa raadinaya inuu helo goolkiisa 700-aad (toddobo boqolaad) ee xirfaddiisa kubadda cagta, waxaana kaga harsan kaliya hal gool.
Kabtanka Barcelona ayaa 15 sano ka hor dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee xirfaddiisa kubadda cagta, kaddib markii uu naadiga Albacete uu ka dhaliyay kubbad uu ka helay Ronaldinho.
Kulankaas ayaa ka tirsanaa horyaalka dalka Spain ee La Liga, waxaana ay dhacday 1-dii Maajo ee sanadkii 2005.
Messi waa ciyaaryahan u ciyaaray kaliya Barcelona xirfaddiisa sare oo dhan, waxaana uu dhaliyay 629 gool (0.87 kulankiiba celcelis ahaan), halka qarankiisa Argentina uu u dhaliyay 70 gool (0.68 kulankiiba celcelis ahaan), isagoo wadar ahaan dhaliyay 699 gool kaddib 858 kulan oo rasmi ah.
Tan iyo xilli ciyaareedkii 2006-07, Messi ayaa dhalinayay ugu yaraan 20 gool xilli ciyaareed walba, iyadoo fasalkii 2011-12 uu dhaliyay 73 gool, waxaana uu ahaa fasal ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa, halka sanadkii 2012 oo qura uu dhaliyay 91 goo (79 ka mid ah waxa uu dhaliyay Barca).
Xiddiga lagu tilmaamo mucjisada Argentina ayaa 126 kulan oo kala duwan dhaliyay min labo gool, halka 41 jeer oo kala duwanna uu dhaliyay saddexley, waxaa intaas u dheer lix jeer oo uu min afar gool dhaliyay iyo hal kulan oo uu shan gool dhaliyay.
Messi ayaa labo gool dhaliyay labadii kulan ee ka dambeysay xannibaaddii coronavirus, halka kulankii saddexaad uu caawa wajahayo kooxda Sevilla oo ka mid ah kooxaha uu goolasha ugu badan ka dhaliyay.
Gogol-dhigga kulanka Sevilla ay soo dhoweyneyso Barcelona, xiddigo muhiim ah oo Barca ka maqan iyo waxyaabaha ka cusub labada koox
DEG DEG: Maxkammaddii qabatay dacwadii u dhexeysay Neymar iyo Barcelona oo go'aan cad ku kala saartay... (Yaa guuleystay?)